Musharax Shariif Maxamed Abdalla iyo C/casiis Laftagareen oo ka tanaasulay wareega labaad ee doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka – Radio Muqdisho
Musharaxiinta kala ah Shariif Maxamed Abdalla iyo Xildhibaan C/casiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ka tanaasulay u gudbida wareega Labaad ee doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ka socota xarunta Golaha Shacabka ee magaalada Muqdisho.
Waxaa hadda loo gudbay wareega saddexaad ee doorashada oo ay isugu soo hareen Labada Musharax ee kala ah Maxamed Mursal Sheikh C/raxmaan iyo Ibraahim Isaaq Yarow.
Musharax Shariif Maxamed Abdalla ayaa u mahad celiyay Xildhibaanada u codeysay iyo kuwa aan u codeyn intaba,isagoona kula dardaarmay in si mas’uuliyad iyo Xilkasnimo ku jirto u doortaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Sidoo kale,Musharax C/casiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa u sababeeyay tanaasulkiisa mid uu ugu turayo Xildhibaanada una fududeeyo doorashada.
Wuxuuna cadeeyay inuu ku faraxsan yahay inuu tartamo,Xildhibaanadana codkooda ay siiyaan,waxaa hadda socota codeynta doorashada wareega saddexaad.
Afar Musharax oo u gudbay wareega labaad ee doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka